RIKOODHADII laga diiwaan geliyey kulankii ay kooxda Real Madrid ku hanatay Koobka Kooxaha Adduunka… (Maxay ka dhignayd saddexleeydii Cristiano Ronaldo?) – Gool FM
RIKOODHADII laga diiwaan geliyey kulankii ay kooxda Real Madrid ku hanatay Koobka Kooxaha Adduunka… (Maxay ka dhignayd saddexleeydii Cristiano Ronaldo?)
Haaruun December 18, 2016
(Japan) 18 Dis 2016 – Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa ku guuleystay koobka kooxaha Adduunka, kaddib markii ay 4-2 uga adkaatay naadiga Kashima Antlers, kulan ka dhacay dalka Japan, iyadoo uu saddex jeer shabaqa soo taabtay kulankan Cristiano Ronaldo.
Kooxda Real Madrid ayaana sidaas ku hanatay koobka kooxaha Adduunka markeedii labaad muddo saddex sano gudahood ah, kaddib markii ay horay u qaaday koobkan sanadkii 2014.
>- Saddex final oo ay Real Madrid ciyaartay iyadoo uu tababare u yahay Zidane, waqtiga caadiga ah 90-ka daqiiqo waxa ay ku dhammaadeen barbaro iyadoo loo baahday in lagu daro ciyaarta waqti dheeri ah (Extra-time), kulamadaasna waa Champions League, European Supercup iyo Club World Cup.
>- Kooxda Real Madrid ayaa sii dheereysatay rikoodhkeeda guuldarro la’aanta, iyadoo aan haatan dhinaceeda dhulka la dhigin ama aan laga adkaan 37 kulan oo xiriir ah, mudadaasna waxa ay Madrid ku guuleysatay saddex koob.
>- Real Madrid ayaa koobkan ku guuleystay 2 jeer, halka FC Barcelona ay hanatay 3 jeer, taasi waxa ay ka dhigan tahay in dalka Spain uu yahay kan ugu badan oo ku guuleystay koobkan kooxaha Adduunka, waxaana Spain koobkan la geeyey 5 jeer.
>- Cristiano Ronaldo ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horreeyey ee saddexleey ama hat trick ka dhaliya final-ka koobka kooxaha Adduunka.
>- Cristiano Ronaldo ayaa maanta dhaliyey saddexleeydiisii (hat trick) 40-aad tan iyo markii uu ku soo biiray kooxda Real Madrid.
>- Kani waa geesi kulammada kama dambaysta ah fakiya kooxdiisa, waxaana Cristiano Ronaldo uu Real Madrid goolal u dhaliyey final-kii Champions League, finalkii UEFA Super Cup, kama dambaystii Copa del Rey, final-kii Supercopa iyo kama dambaystii koobka kooxaha Adduunka.
>- Cristiano Ronaldo ayaa ku jira maalmihiisa ugu fiican Isniintii waxa uu ku guuleystay abaal-marinta Ballon d’Or, Khamiistii la soo dhaafay waxa uu dhaliyey goolkiisii 500-aad ee heerkiisa kooxaha, halka maanta oo Axad ah uu Real Madrid u dhaliyey saddexleydiisii 40-aad.
Ronaldo oo ku guulaystay laacibkii ugu fiicnaa koobka kooxaha aduunka ee 2016
"Asxaabtayda la'aantood waxba ma heleen" - Cristiano Ronaldo